Ebumnuche dị oke mkpa nke ozi mpaghara - Geofumadas
Uru ọnụọgụ nke ozi mpaghara
June, 2012 Cartografia, Land Management
Na usoro nke ngosi nke Map nke Geological nke Canary Islands, nke Nzukọ Ọmụmụ Nkà Mmụta Bara Uru nke Ozi Obodo. Isi ihe di otu a gha elekwasị anya ozi ala, na dị ka ụzọ dị mma nke nwere ihe ọmụma banyere ọnọdụ anụ ahụ nke mbara igwe na mmalite nke oge ya, bụ a ihe mgbakwasị ụkwụ maka atụmatụ na nmalite ọmụmụ banyere omume ụmụ mmadụ n'ókèala, nakwa maka iji aka ma ọ bụ mgbanwe ya.
The omume ga-abụ na Tenerife - Canary Islands na July 4 na 5, 2012. Ọ bụ n'ezie na-akpali akpali ma na-akpali confluence nke ngosi ebe mkpa, ọganihu na ihe ịma aka na ofu-institutional data management na isiokwu ndị dị ka:
Ihe ize ndụ
Ịmepụta na ikesa nke ozi ala
Akwụkwọ ndekọ na Cadastre
Atụmatụ ime obodo
Ihe akụrụngwa ihe
Ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ
Ihe omuma na mmefu ego
Ewezuga ihe ngosi mpaghara, ndị ngosi si Mexico, China, Italy na Cape Verde ga-esonye. Oghere nke gvSIG Foundation ritere na usoro mgbasa ya dịkwa oke mkpa site na ngosipụta banyere mkpa ọ dị iji teknụzụ n'efu na njikwa nke ozi gbasara ohere.
N'ihe omume mmeghe ahụ, Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọmụmụ Ihe na Mining nke Spain (IGME) ga-eweta Map nke Geological nke Canary Islands na ndị na-aga mgbakọ mmemme ga-enye otu akwụkwọ a, mgbe ahụ, ụbọchị ahụ ga-agụnye isiokwu na arụmụka ndị a:
Nsonaazụ nke Modul Environmental nke National Consensus of Government Government na 2011 Delegations.
UNIFIES: Ihe omuma banyere usoro ihe omuma aku na uba. Ihe ngosi a na-ede n'ókèala metụtara mkpebi na ọnọdụ akụ na ụba
Nkọwapụta, eserese na-emeghe data: na-agbakwụnye uru maka Canary Islands
National Geostatistical Framework, Akụrụngwa maka ihe ndekọ banyere ọnụ ọgụgụ ndị na-ede banyere Georeferencing, nnyocha na nchịkọta akụkọ
Atụmatụ na atụmatụ mpaghara
Atụmatụ mpaghara na Canary Islands
Nhazi na ọkọlọtọ eji ede ihe. Ngosipụta na nchịkwa mpaghara: usoro nke mbipụta na
ụmụ amaala òkè
Ọnọdụ ziri ezi nke ime atụmatụ atụmatụ nke usoro atụmatụ na ịkwado nchekwa data ya. 1995-2012, ahụmahụ nke Cabildo de Gran Canaria.
GABITEC European Project MAC 2007-2013. Imeziwanye nke ndi mmadu na-eche atụmatụ
Ozi obodo na mkpebi ikpe na-eme atụmatụ mpaghara
Mmepụta / mgbasa nke Ozi Ala
Mmepụta na ojiji nke eserese nke China
Mmepụta Geographic na INEGI
Nhazi nhazi na nhazi ozi na ọrụ na mba na Europe
Ịnweta ozi gbasara ala na Spain site na njikọ data gbasara ohere. INSPIRE-LISIGE
5 Kwadoro Ochichi ala nke China
Ndebanye aha nke akụ na ụba na akụnụba
Mmemme maka mmezigharị na Njikọ nke Registries of Property and Cadastre
Ihe nrubanye aha na-adabere na ozi mpaghara ebe ejikọtara na ntọala ndebanye aha
Nchịkwa System nke Ala Land nke Cape Verde
Ozi mpaghara na nchebe iwu: ụfọdụ ihe atụ
Owuwu gburugburu ebe obibi
Technology na ọrụ nchebe gburugburu ebe obibi na APMUN
Map Ndị Egwu: Ebumnuche na ịba uru na Nchedo Obodo
Map nke Crops nke Canary Islands. Usoro nhazi, ngwa na ojiji
Mbelata Mgbawa Volcanic na Canary Islands
Ọchịchọ dị na Canary Islands. Ihe atụ nke usoro nchịkwa
Bank Data Bank. Ngwongwo na nchekwa ihe nchekwa
Gbasa Ozi Geographic
Ihe ngosi anya nke Geostatistical n'okpuru nchịkwa Map Map nke Mexico
Ọdịdị Data Spatial Data nke Canary Islands
Mbipụta, nrigbu na mmelite nke ozi ala. Nchịkwa nke ọdịnaya ala maka ndị ahịa dị iche iche. GEOWEBENGINE (R + D + M)
gvSIG: nkà na ụzụ n'efu maka nchịkwa ozi ala
Ụlọ ọrụ iji kwalite nkwado nke ụlọ ọrụ nchịkwa obodo: ụkpụrụ nhazi na ịrụ ọrụ nke ọma maka nkwado mmekọrịta ọnụ maka atụmatụ na njikwa nke ókèala ahụ
Anyị na-atụ anya na akwụkwọ ahụ ga-adị n'Ịntanet.
Previous Post«Previous The Trans 450, idgbọ ala na-agba ọsọ ọsọ maka Tegucigalpa
Next Post Afọ dị ukwuu nke Google ChromeNext »
2 Na-aza "Uru usoro nke ozi mpaghara"
Richard Guzman kwuru, sị:
Oganihu nke obodo bu ihe onu oganihu, karia n'ime mba ndi ka na emepe emepe dika uzo nke usoro mmepe obodo na ime obodo. Ọnụ ọgụgụ nke ndị bi na ya, karịa ihe niile n'ihi na ọnụọgụ abụọ nke ịkwụsị ego, nwere ihe ịga nke ọma, mmekọrịta akụ na ụba na omenala; karịsịa mmụba nke mpụ na mpụ, ọtụtụ nsogbu dị ukwuu n'ime obodo ndị na-abanye.
Inwe nlekọta nke nlekọta ógbè na-enyere aka ito eto obodo dị n'usoro.
Juan Antonio Bermejo Dominguez kwuru, sị:
"The GRAFCAN gag". Publiclọ ọrụ ọhaneze a enyochala okwu m zigara ha metụtara otu isiokwu nke ha bipụtara M http://juan-bermejo.blogspot.com.es/